Speed ​​Test Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု, Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းအင်တာနက်မြန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးသင့်ရဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းမီတာပါ!
Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း - အာဏာအရှိဆုံးကအင်တာနက်မြန်နှုန်းမီတာ, တိကျမှန်ကန်သောအစီရင်ခံစာနှင့်အတူ, စက္ကန့်အတွင်း Wi-Fi Speed ​​ကိုစမ်းသပ်။ အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ် Wi-Fi ဟော့စပေါ့နှင့် GPRS (2G, 3G, 4G, LTE ကို) ၏မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ထောက်ခံပါတယ်။
Network ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း - Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း, အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုကွန်နက်ရှင်အမြန်နှုန်းစစ်ဆေး, သင့် Wi-Fi ပတ်ဝန်းကျင်မှာ scan ဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်! Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း - အင်တာနက်အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်အဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါ!
2.90 ကို MB